> भाइटीकाको शुभसाइत कात्तिक १२ गते ११ः५५ बजे
८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ११:४४
काठमाडौं ,८ कात्तिक । भाइटीकाको शुभसाइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिले तिहारका विभिन्न पर्वको निर्णय गर्दै भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिए ।
राज्य सन्चालकले भने साइतमै टीका लगाउनुपर्छ । सर्वसाधारणका लागि दिनभर टीका लगाउन कुनै समस्या छैन । यस वर्ष यमपञ्चक कात्तिक ८ गते शुक्रबारदेखि सुरु हुन्छ । त्यसदिनदेखि यमदीप दान सुरु गरिन्छ । कात्तिक ९ गते शनिबार काग तिहार परेको छ । यसैगरी, धनवन्तरी जयन्ती र धनतेरस पर्व पनि यसै दिन परेको छ ।